7 emahombekombe akanakisa kumaodzanyemba kweItari | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Italia, Beaches
Kana mamiriro ekunze akanaka achisvika isu tatova nekunzwa kunge mahombekombe, uye sezvo avo vari munharaunda medu vatozivikanwa, tinoda kurota mamwe mabishi enzvimbo dzinonakidza. Kunge iyo 7 akanyanya mahombekombe kumaodzanyemba kweItaly. MuItari hakuzove nekushomeka kwemahombekombe akanaka uye epakutanga, neGungwa reMediterranean kumashure uye nemamiriro ekunze anokatyamadza.
Cherekedza aya mahombekombe, kunyangwe isu tine chokwadi kuti tine mamwe akawanda. Iwo anongova mashoma mashoma ejecha, asi iyo gungwa reItari uye zviwi zvazara nemabhichi akakosha kurasikirwa nawo. Parizvino tichaona chinzvimbo chemabhichi manomwe atinoda kushanyira nhasi kuti tinakirwe nemamiriro ekunze eMediterranean.
1 Scala dei Turchi muAgrigento, Sicily
2 Marina Piccola muCapri
3 Marina dell'Isola muTropea, Calabria
4 Spiaggia dei Conigli muLampusa, Sicily
5 Cala Rossa pachiwi cheFavignana, Sicily
6 Baia delle Zagare muGargano, Puglia
7 Cala Spinosa muSanta Teresa Gallura, Sardinia
Scala dei Turchi muAgrigento, Sicily
Isu tinotanga neimwe yeakakurumbira pane ese, anozivikanwa neaya machena machena akavezwa nemafungu uye nemhepo, izvo zvakagadzira zvakasarudzika maumbirwo, sekunge dai aive masitepisi. Zita rako, 'Masitepisi eTurks' Zvinouya kubva kumawere aya uye kuti iyi yaive nzvimbo yekuvanda vevapambi veTurkey mazana emakore apfuura. Icho chiri pamhenderekedzo yeRealmonte, mudunhu reAgrigento. Iine jecha rakanaka uye nemvura yakachena yekugezesa, uye limestone yekugara yemakomo inoita kuti ive neruvara ruchena rwakanaka kusiyana negungwa. Iye zvino vapambi havachahwande mariri, asi zvirokwazvo zvakakodzera kushandisa nguva yekuhwanda pamahombekombe aya, wakarara pamatombo kana mujecha.
Marina Piccola muCapri
Kana tichitaura nezvaCapri tinorangarira kuti chitsuwa ichi chaive nzvimbo yekutizira yaPablo Neruda, asiwo yevakuru Hollywood nyeredzi kubva kuma50s, uyo akawana paradhiso yakakwana pachitsuwa chidiki ichi. Saka hatina kukwanisa kupotsa mumapoka edu mahombekombe ari pachitsuwa ichi chakanaka, nzvimbo inopesana nepaparazzi yevakakurumbira kubva kune imwe nguva. Nhasi ichiri nzvimbo ine mukurumbira, kunyangwe isiri yakawanda semakumi emakore apfuura, asi ichiri kuendesa iyo imwecheteyo. Iyo Marina Piccola iri munzvimbo yeCampania. Iyo diki bay inodzivirirwa nemadziro edombo nemaonero emawere ari pamberi pegungwa. Kune nzira dzinoverengeka dzekuenda ikoko, asi inonyanya kufarirwa uye yekutanga ndeyeKrupp, nzira inoyerera yematanho.
Marina dell'Isola muTropea, Calabria
La Marina dell'Isola inomiririra ayo matombo mafomu uye nekuve yeguta remahombekombe asi kurota. Mudunhu reVibo Valentia, mu Tropea, CalabriaIri ndiro hombe gungwa, riri pakati pe 'Isola Bella' uye 'Playa de la Rotonda'. Inomira padombo hombe rinopinda mugungwa uye rinoparadzanisa mahombekombe, iripi kereke yeSanta María de la Isla, nzvimbo yekare yeBenedictine. Panguva imwecheteyo yatinonakidzwa nemahombekombe akanaka, tinogona kunakidzwa neguta reTropea, rine dzimba dzakatarisana nedombo, uye nekwatinogona kuona kereke yaro yekereke yeRomanesque.
Spiaggia dei Conigli muLampusa, Sicily
Iyi ndiyo 'Gungwa reTsuro' kana tikadudzira zita rake, muchiLampusa. Iro rine zita raro kuchitsuwa chiri pamberi pacho, Isola dei Conigli, uye inoonekwa seimwe yemabhichi akanaka kwazvo pasi rese. Uye zvechokwadi inofanirwa kuve nekuti inzvimbo yemhandara yerunako rukuru, ine yakajeka mvura yekristaro. Zvinofanira kutaurwa kuti kusvika ipapo unofanirwa kufamba kwekanguva munzira uye kuti muzhizha inowanzo kuve yakazara. Pakupera kwezhizha tinogona kuona kamba munzvimbo iyi kana tiine rombo rakanaka.
Cala Rossa pachiwi cheFavignana, Sicily
Iyi Cala Rossa ndeye kuchengetedzwa kwechisikigo kweAegades Islands, paFavignana Island. Iyo nzvimbo yakambocherwa matombo, uye inova nzvimbo inoshanya kwazvo. Ikozvino inomira kunze kwayo inoshamisa yakajeka mvura, ine turquoise uye bhuruu toni munzvimbo hombe yekugeza kana snorkeling. Iyo yakapoteredzwa nharaunda nharaunda maunogona kutora kufamba uye matombo mafomu anopedzisa kupihwa kweiyi inonakidza uye yakanaka gungwa.
Baia delle Zagare muGargano, Puglia
Inowanikwa mu Gargano National Park iwe uchawana bay iyi. Muchi bay ichi zvinhu zvinoverengeka zvinoonekera, uye ndeyekuti inzvimbo yakanaka pachisikigo ine chitarisiko chemusango, icho, zvisinei, chatove chakashanya kupfuura zvekare, uye chine maamburera pamhenderekedzo uye mamwe masevhisi. Inomiririra kunhuwirira kwemaruva orenji uye nekuumbwa kwenzvimbo dziri pakati pegungwa, idzo dzakaumbwa nekukukurwa kwemvura nemhepo, chimwe chinhu chinotiyeuchidza nezvemabhichi akadai seLas Catedrales muLugo, Spain.
Cala Spinosa muSanta Teresa Gallura, Sardinia
Mutaundi re Capo Testa iwe unowana Cala Spinosa, gungwa rinosvikwa nenzira dzinenge dzakadzika. Chinhu chakanaka pamusoro peichi chidiki chidiki ndechekuti havazi vese vanodisa kuita nhanho yekusvika kwazviri, asi zvirokwazvo zvakakosha kuti unakirwe nemvura yakajeka iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » 7 emahombekombe akanakisa kumaodzanyemba kweItari
10 dzakachipa nzvimbo dzekuEurope dzemazororo
Mojácar, inonakidza nzvimbo yekuAlmería